गाई काण्ड : धार्मिक द्वन्द्वको बिजारोपण
के आर पाण्डुलिपि/अहिले एक विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ, विषय हो– गाई काटेर खानुपर्छ । जताततै यसको चार्को बहस चलेको देखिन्छ । यस विषयको कोही पक्षमा त कोही विपक्षमा आफ्ना मत राखेको देखिन्छ । केही भने यी दुबैभन्दा माथि उठेर बोलेको पनि देखिन्छ ।
धर्मनिरपेक्ष भएको देशमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर नमान्ने तर्क गर्ने एक जमात छ । यसरी हेर्दा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा करिब ८० प्रतिशात दिन्दुधर्मावलम्बी छन् । स्मरण रहोस्– ८० प्रतिशतभित्र ब्राह्मण, क्षेत्री र जनजातिहरू सबै छन् । यसको अर्थ गाई काट्न र मासु खान चाहाने राई, लिम्बू तामाङ वा जो गाई काट्ने पक्षमा छन् उनीहरू हिन्दु हुनै सक्दैनन् । अब धर्मको बिषयमा लड्नु पर्ने कारण देखिदैन ।
कुरा आउँछ–संस्कार र जातको संस्कारले गर्दा फरक मत देख्न सकिन्छ । राई, लिम्बू, भोटे वा अन्य कुनै नेतृत्वको संस्कारमा गाईको मासु अनिवार्य छ भने त्यो कुरालाई पनि मध्य नजर गरिनुपर्छ । मेरा एक राई साथीका अनुसार उनीहरू खसी/बाख्राको मासु खाँदैनन् । तर ब्राह्मण, क्षेत्रीहरू खान्छन् । केही जनजाति पनि खान्छन् । यसको अर्थ संस्कार बाजिएको मात्र हो । समय अनुसार परिवर्तन आवश्यक छ । परिवर्तनको नाउँमा सनातन धर्म संस्कृतिम बस्न पटक्कै मास्न पाइँदैन । मूल्यमान्यता नहुँदो हो त कस्तो होला समाज ? कुरा आउँछ सनातन धर्मको अर्थ के हो ? कि हामीले यो पनि बुझेका छैनौ ? धर्म संस्कृतिको महत्व नबुझेकाले बाह्य शक्तिको उक्साहटमा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
फुटाउ र राज गरको नीति लिएर नेतृत्वमा पुगेका नालायकहरूले अनेक प्रकारका हड्डी फालेकै भरमा हामी किन हड्डीको पछि लागेका छौं ? गाई काट्ने कुरा धर्ममाथि प्रहार गरेर सनातन धर्म तथा देशलाई कम्जोर बनाइनु हो । कमजोर बनाएर राज गर्न चाहेको कुरा हामीले बुझ्न ढिलो गरेका छौं । गाई हाम्रो राष्ट्रि जनावर हो । यसमाथिको प्रहार राष्ट्रमाथि प्रहार हो । गाईलाई हिन्दु धर्ममा भगवानको रूपमा पूजिन्छ ।
जसरी राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहणलाई हिलो छ्यापी राष्ट्र र सेनालाई हिलो छ्याप्ने काम भएको छ त्यसैगरी पूर्व प्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको माध्यामबाट न्यायालयमा प्रहार गरी जनताबाट न्यायलय प्रतिको विश्वास खोस्ने प्रयास गरियो । र, त्यसरी नै गाईलाई माध्याम बनाई धर्म र राष्ट्रमाथि प्रहार भएको अनुभूत पंक्तिकारलाई भएको छ ।
डलर खाएर उनीहरूका एजेन्डा बोक्ने व्यक्तिहरू हाम्रै आगाडि छन् जसरी भेडाको छाला ओडेर ब्वासो भेडाको बथान छिरेको थियो । तसर्थ, हामी एक स्वतन्त्र देशका नागरिक हौं । जातिय तथा धार्मिक जातिय द्वन्द्व निम्ताउने खालका कुरालाई बहिस्कार गरौं । र,एक असल नागरिक बनौं । यदि हामीले यसो गर्न सकेनौैं भने भोलिको अवस्था झन भयानक हुनेछ । देशमा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सबैको साथ र सहयोगको खाँचो छ ।
प्रकाशित ११ चैत्र २0७४ , आइतबार | 2018-03-25 06:05:33
विप्लवको पुस्तक ‘महापतन’बारे डा.ऋषिराज
डा. ऋषिराज बराल, विप्लवले जसरी घटनासन्दर्भलाई ‘उनीहरू’ र ‘हामीहरू’ मा विभाजन गरेका छन्, यो राजनीतिक इमानदारी होइन, यो यथार्थको
तिहारको पहिलो दिन अर्थात काग तिहारलाई धनतेरसका रुपमा पनि मनाइने प्रचलन छ । हरेक वर्ष कार्तिक कृष्णपक्ष त्रयोदशीका दिन पर्ने यो धनतेरस
दुुर्गा को हुुन् ? किन उनको सम्झना र पूूजा गरिन्छ ? कहिलेदेखि पूूजाको परम्परा र विधि सुुरू भएको थियो जस्ता जिज्ञासा धेरै उठने गर्छन् ।
विष्णुप्रसाद पन्त, बेलायत संसारकै शक्तिशाली सम्पन्न देश मध्येमा पर्छ । यहाँको चरम आधुनिक विकास, वेशभूषा र रहनसहनलाई नेपाली आँखाले हेर्दा
धर्मराज जोशी, कैलाली सरकारले विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न कसिलो कानुन नबनाएका कारण मुलुकको विद्यालय तहको शिक्षाले गुणस्तरीय